८ घण्टा काम गर्ने श्रीमान १६ घण्टा बढी काम गर्ने श्रीमतीलाई आफुले पाल्नुपर्ने चिन्ता लिन्छन ! – AB Sansar
November 26, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on ८ घण्टा काम गर्ने श्रीमान १६ घण्टा बढी काम गर्ने श्रीमतीलाई आफुले पाल्नुपर्ने चिन्ता लिन्छन !
श्रीमती पाल्ने कि श्रीमान् ??….
सुदुर समाज / सरिता दाहाल – रिपोर्टिङको सिलसिलामा छोटो यात्रामा थियाैं । साथमा थिए एक पुरुष पत्रकार अनि पाँच जना अधिकारकर्मी । गाडीमा थियौं । बिहेको सिजन बाटोमा एक विहेको जन्ती भेटिए । त्यसपछि स्वभाविक विहेको कुरा निस्किने नै भयो । टीममा अविवाहित पत्रकार साथी मात्रै थिए । भनें, – ‘ल है यो महिना पनि जन्ती नलगी जाला नी !’ ‘अब चैं विचार गर्दैछु । स्नातकोत्तर सकें । पत्रकारितामा पनि राम्रै भइरहेको छ । श्रीमती पाल्न सक्छु भन्ने आँट बढेको छ ।’ उनले भने । जिज्ञासा थपें, ‘तीन दशक कट्दासम्म विहे नगरेको श्रीमती पाल्न सक्दिन भनेर पो ?’ ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
उनको सहज जवाफ थियो, – ‘हो त, अर्काको छोरी ल्याएपछि पाल्न नकिएन भने ! अहिले त, महिलाको लागि यत्रा कानूनहरु आएका छन् । विचरा हामी पुरुष !’ ‘परिआए अहिलेका श्रीमतीले श्रीमानलाई नै पाल्छन्’ मैले थपें । एक अधिकारकर्मी दिदीले पनि भन्नुभयो – ‘श्रीमती गाई भैंसी हो र पाल्नुपर्ने चिन्ता ?’ ‘गाई, भैंसी पनि बिना काम कसले पाल्छ र ! गाई भैंसीले दूध नदिउन् त कलिलो, कलिलो घाँस खोज्न को जान्छ जंगल जंगल ? कसले दिन्छ समय मिलाइ मिलाई दानापानी ? हामीले गाई भैंसी पालेका हैनौं लगानी गरेका हौं ।
तिनीहरुबाट आउने प्रतिफलको आशा गरेर’ – म अलि चर्किएछु क्यारे । पत्रकार साथी चुप थिए । कुराकानी चल्दै थियो । कार्यक्रम स्थल पुग्यौं । कार्यक्रम सुरु भो, सकियो । घर फर्किएँ । तर, मेरो मनको तरंग भने सेलाउँदै सेलाएन ।मैले पनि विवाह गरेको छु । दुई सन्तान छन् । तर, श्रीमानले पालिदेलान् भन्ने आशा कहिल्यै गरिन’ । तर, पुरुषलाई विवाह अघि ‘श्रीमती पाल्ने’ आँट’ किन’ चाहिने ? हामी महिला’ स्वयं परिश्रमले’ बाँच्न सक्दैनौं’ ? कि महिलाको’ कमाइको अर्थ’ नै रहँदैन ?
यीनै कुरामा घोत्लिँदै गर्दा झण्डै २० वर्षअघिको आफ्नै घरको स्मृति ताजा भएर आयो । घरमा आमाको तुलनामा बाबा घाँस सोत्तर कुँडो पानीमा कमै सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला खोरमा १८/२० वटा बाख्रा हुन्थे । गोठमा ४/५ वटा दुहुना भैंसी, उहीँ संख्यामा गाई । २ हलसम्म गोरु अनि कुखुराहरु । हामी ३/४ वर्षको फरकका ५ जना छोराछोरी । ३ दिदीको विहे भइसकेको थियो । गाउँमा खेतीपाती धान्ने आधार अर्मपर्म नै थियो । पर्ममा आमा नै जानुहुन्थ्यो । दिदीहरु पनि सकेको सघाउनु हुन्थ्यो । ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
युवक संघका उपाध्यक्षको परिवार चढेको भ्यान त्रिशुलीमा खस्यो, चालक र श्रीमतीको मृ’त्यु, छोरी बे’पत्ता !
छोरीको जन्मदिनमा सृजनाले सियोनालाई गरिन् यति धेरै रकम सहयोग !
कैलालीमा साथीको हत्या गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
June 9, 2021 santosh
नेपालमा ‘एन्टिजेन विधि’बाट कोरोना परीक्षण सुरू, आधा घण्टामै नतिजा आउने
November 30, 2020 santosh
ईसेवाले २६५ कर्मचारी माग्यो , घर मै बसेर काम गर्न मिल्ने, योग्यता SEE/SLC
May 26, 2021 santosh
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज ८ गते शुक्रबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेन्रुहोस राशिफल September 23, 2021
यसकारण आमाले भारतीलार्इ जन्माउन चाहन्थिनन्, तर आज उही भारती बनिन् भारतकी हाँस्य रानी September 23, 2021
‘सरकार महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?’ September 23, 2021
वाइवाइ जिङ्ग चाउचाउ खादा धरानका किरणले पाए स्कुटर September 23, 2021
धर्ती मातालाई देखेपछि एकाएक किन रुँन थाले भक्तजनहरु September 23, 2021